गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा बोकाको बलि दिएर ५ बजे बालुवाटार सर्ने !
ARCHIVE, POLITICS » गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा बोकाको बलि दिएर ५ बजे बालुवाटार सर्ने !
काठमाडौं । गणतन्त्र नेपालका ९ औ प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा ज्योतिषको सल्लाह अनुसार १४ दिनपछि सरकारी निवास बालुवाटार सर्ने भएका छन् ।
साइत हेराउँदै जाँदा असार ५ मा उपयुक्त समय मिलेपछि १४ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवा बालुवाटार सर्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पाँच असारमा बालुवाटार सर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
सोमबार पाँच बजे बालुवाटार प्रवेश गरिसकेपछि ६ बजेभित्र पूजाआजा गरिसक्ने गरी तालिका तय भएको बुढानिलकण्ठ स्रोत बताउँछ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले बालुवाटार सर्दा गर्ने गरेको जस्तै पूजाको विधि गर्ने तयारी छ । पूजासहित बोकाको बलिसमेत दिने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत बताउँछ ।